လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဘိလပ်မြေ ၂ မျိုး
Posted by Fros on April 08, 2015
ရိုးရိုး ဘိလပ်မြေ (ordinary portland cement) နဲ့ ဖျော်ထားတဲ့ ကွန်ကရစ်ကို ကွန်ကရစ်ခင်းပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ မမာသေးလို့ အသုံးမပြုနိုင်တာ အားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ကွန်ကရစ်လမ်းတွေ ပျက်နေလို့ ၊ ကွန်ကရစ်တံတား ကြမ်းခင်းတွေ ပေါက်နေလို့ လူကြီးလမ်းကြောင်း မလာခင် အချိန်တိုအတွင်း လက်ပူတိုက် တပွဲထိုး ပြင်ရမယ့် အစိုးရအလုပ်က သူငယ်ချင်းတွေ သုံးသင့်တဲ့ ဘိလပ်မြေ ၂ မျိုး အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၂ မျိုးကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
၁။ Magnesium Phosphate Cement (MPC)
ဒီဘိလပ်မြေကို သုံးရင် ဖျော်ပြီး ချက်ခြင်း ခင်းရပါမယ်။ ဖျော်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် အတွင်းမှာ final setting ဖြစ်ပြီး မာသွားပါတယ်။ ၂ နာရီ အတွင်းမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ ကွန်ကရစ်တံတား ကြမ်းခင်းတွေ၊ ကွန်ကရစ်လမ်းတွေဆိုရင် ၂ နာရီအတွင်း ကားတွေ ဖြတ်လို့ရပါပြီ။ အအေးခန်း စက်ရုံတွေရဲ့ ကြမ်းခင်းတွေမှာလည်း သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချိန်တိုအတွင်း high early strength တက်တဲ့ ဘိလပ်မြေတွေရဲ့ chemical reaction တွေဟာ stable မဖြစ်ဘဲ အချိန်ကြာရင် strength ပြန်ကျတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေးကြီးတဲ့ concrete Structural members တွေဖြစ်တဲ့ building's beams, columns , slabs စတာတွေမှာအသုံးမပြုရပါဘူး။
၂။ High Alumina Cement (HAC)
ဒီ Cement ကလည်း အချိန်တို အတွင်းမာပြီး strength မြန်မြန်တတ်တဲ့ Rapid hardening , high early strength အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၈ ရက်မှ ရမယ့် compressive strength ကို ၂၄ နာရီအတွင်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် strength မငြိမ်ပါဘူး။ နှစ်အနည်းငယ် ကြာရင် ဘိလပ်မြေထဲမှာပါတဲ့ chemical တွေ နောက်ထပ် ဓါတ်ပြု ပြီးကွန်ကရစ် strength တွေ ကျလာပါတယ်။
သူ့ကို ကွန်ကရစ် ကားလမ်း၊ တံတားကြမ်းခင်း၊ လေယာဉ်ပြေးလမ်းတွေ ပြင်တဲ့ နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ မြန်မြန် strength ရတော့ မြန်မြန် လမ်းဖွင့်ပေးလို့ ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရာသီဥတု အေးတဲ့ ဒေသတွေနဲ့ အက်ဆစ်သုံးတဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးကြပါတယ်။ တခြား ဘိလပ်မြေတွေထက် ပိုပြီး အက်ဆစ်ဒဏ်ခံနိုင်တယ်။
အရေးကြီးတဲ့ ကွန်ကရစ် Structural members တွေမှာ အသုံးမပြုဖို့ British Standard (BS) code က တားမြစ်ထားတဲ့ ဘိလပ်မြေ အမျိုးအစားတခုက High Alumina Cement ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ၁၉၇၆ ကတည်းက တားမြစ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် BS code ကို ယူသုံးတဲ့ စလုံးမှာ ဒီဘိလပ်မြေကို Structural members တွေမှာ မသုံးရပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီ ဘိလပ်မြေ အမျိုးအစားတွေကို အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးမပြုဖို့ တားမြစ်ထားသလား မသိပါဘူး။ တားမြစ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်တုန်းက ဘယ် အစိုးရဌာနက တားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့ data ကို မသိရသေးပါဘူး။
သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ချာတခုကို အကျဉ်းချုံးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit to Original Uploader
Civil General Knowledge Knowledge
I am not open to many people. I'm usually quiet. I love to share what I know.
Mi Phone အားလုံးအတွက် Zawgyi Font ထည့်နည်း ပေါင်းစုံ
Mi Phone အားလုံးအတွက် Myanmar Font ဖြစ်တဲ့ ZawGyi Font ထည့်နည်း ပေါင်းစုံလေးပါ။
Credit to Khaing Su Hlaing , Copy From Myanmar Mi Fans Facebook Group စာဖတျမရလြှငျ ဒီကိုနှိပျပါ အောက်ကနည်းများအားလုံး Redmi note 3g v5 MIUI5မှာ မသုံးပါနဲ့
======= 1. Font အလှ
https://www.mediafire.com/folder/x69b95hl5zl9r/Fonts ====== 2. Theme Font (No need root)
MIUI6Settings > Additional Settings > Fonts > choose system font > type Zawgyi and apply it
MIUI7Settings > Fonts > type Zawgyi and apply it.
3. ဇော်ဂျီလည်းမြင်ရတယ် COC မှာလည်းမြင်ရတယ်
method 1 : ifont with system mode (playstoreကနေဒေါင်းပါ)
method2: fonter with standard mode must tick both roboto n fallback (playstoreကနေဒေါင်းပါ)
method3:2droidsan လဲနည်း https://www.dropbox.com/sh/4iyrc8i26egfy2c/AAC2ufvaLtFN3_Djr8fvYgZia?dl=0
မှတ်ချက်။ Mi4i, Mi Note Pro အတွက်မသေချာပါ။ MIUI7 မှာပါ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
4. Total Solution 1.1
Zeyar Lin 18/08/2018
မနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ Mi ဖုန်းတွေအ…
Warriors Orochi3Ultimate -Mystic Weapons Guide-
Hello! Here is the best possible full guide of unlocking the so called 'Mystic Weapons'. These weapons can only be acquired in Musou Orochi2Ultimate (Warriors Orochi3Ultimate) and by completing certain conditions.
If you are trying to get Zhao Yun's Mystic Weapon, you must play as him.You MUST play on Hard or Chaos difficulty.If you succeed the certain requirement needed, you will getaprecious item report which will be highlighted in green. If you are unsure, just check the battle log.You can temper with the Mystic Weapons and you can only get ONE.Mystic Weapons have very high base attacks and it will go higher when the Weapon Familiarity bar has reached maxed.
Game ဘာဖြစ်လို့ computer မှာ မ run နိုင်ရတာလဲ
အဲ့ဒါတော့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးပါ။ အရင်ဦးဆုံး Game မဝယ်ခင် ကိုယ့်စက်နဲ့ ကိုက်မကိုက်ဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ steam တို့ online ပေါ်က digital နဲ့ တိုက်ရိုက်ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်က ဂိမ်းခွေတွေ ဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မစစ်ဆေးပဲ ဝယ်မိလို့ ရှိရင် ဂိမ်းဝယ်ပြီး ကိုယ့်စက်က မနိုင်လို့ မဆော့ရဘူးဆိုရင် ဂိမ်းခွေဖိုး အလဟဿ ဖြစ်ကုန်မှာပါ။ ဂိမ်းခွေ cover တွေမှာ ဂိမ်းတစ်ခု ကောင်းကောင်း run နိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရေးပေးထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်စက်က ဘယ်လို အမျိုးအစားဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စက်က ဘယ်လိုအမျိုးအစား သိချင်ရင်တော့ Run Box မှာ dixdiag ဒါမှမဟုတ် msinfo32 လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ကိုယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားတဲ့ windows တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ့်စက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဘယ်လို ရှိလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
+ R တွဲ နှိပ်လိုက်ရင် run box တက်လာပါပြီ။
အနီနဲ့ပြထားတာတွေက game ကိုယ့် computer မှာ run နိုင် မနိုင်ဘူးဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်ရမယ့် အချက်တွေပါ။
ကိုယ်ဆော့ချင်တဲ့ game ကိုယ့်စက်နဲ့ ကိုက်မကိုက်ဆိုတာကို Online ပေါ်ကနေလဲ စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတ…
Computer မှာ သုံးလို့ရတဲ့ zapya application ပါ..... သိကြတဲ့အတိုင်း phone အချင်းချင်း zapya သုံးပြီး data အလွဲအပြောင်း လုပ်တာ မြန်ပါတယ် .... zapya က wifi သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မြန်တာပါ ......... ထို့အတူ computer မှာ zapya application ကို သွင်းထားရင် computer နဲ့ phone ကို ကြိုးနဲ့ ချိတ်စရာမလိုပဲ computer မှာ ပါတဲ့ wifi သုံးပြီး data လွဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်...
Desktop computer မှာဆိုရင် built in Wifi မပါတဲ့အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ.... wifi လွှင့်ပေးတဲ့ usb stick တွေ ရှိပါတယ်.... တစ်ချောင်းကို ၂ သောင်းခွဲ ၃ သောင်းလောက်ရှိပါတယ်...... အဲဒါ ဝယ်ပြီး computer မှာ တပ် ပြီးရင် zapya application သွင်းလိုက်တာနဲ့ zapya သုံးပြီး data အသွင်းအထုတ် အသုံးပြုလို့ရပါပြီ........ တစ်ချို့ laptop တွေမှာ built in wifi မပါရင်လည်း အခုလိုမျိုး wifi usb stick ဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်....
Windows XP, 7, 8, 8.1 မှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်...... Windows 10 ကိုလည်း support ပေးထားတဲ့အတွက် သုံးလို့ရပါတယ်....... အရှေ့ version တွေ တုန်းကလိုမျိုး computer က Data ပို့လို့ရပေမယ့် phone ကနေ data ပို့လို့မရတာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး... အခု versi…
Dynasty Warriors 8 - Hypothetical Guide
As you already know, the game will now feature Hypothetical Stages (also known as 'What-if' scenarios in the Japanese Version). These stages will feature events and special cutscenes. So, I have compiled this guide on how to unlock these 'Star' objectives.
Red Box/Arrow = Star Objective
Stage 1 - Yellow Turban Rebellion
*Difficulty of getting the star objective = 1/5
1.Assisting the peasants will affect the Battle of Fan Castle
2.Helping the people will enable Zhang Jiao to join the battle at Hulao Gate (He will also appear in Fan Castle Hypothetical Branch).
TIP - At the end of the stage, if done correctly, Liu Bei will havealonger conversation with Zhang Jiao and he will survive the battle. The location of the peasant will be random, but they will be inside one of the3bases.
FFXV Ultimate collectors editions အခုရေ 10,000 ကျော် ထပ်ထုတ်ဦးမယ်
Square Enix က ultimate collectors editions အခုရေ 10,000 ကျော် ထပ်ထုတ်ဦးမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ စရောင်းမယ့်နေ့က Monday, May 23 ဖြစ်ပါတယ်။ North America မှာ Monday, 9AM PST မှာ အရင်တစ်ခေါက်က မရလိုက်တဲ့ wait list ထဲမှာရှိနေတဲ့ လူတွေကို အရင်စရောင်း ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Europe မှာတော့ Monday, 10 AM ကစပြီး Square Enix's EU Store မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးသူ ယူစနစ် နဲ့ တစ်ယောက်လျှင် တစ်ခုသာ ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား regions တွေအတွက် အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ => http://eu.square-enix.com/en/blog/update-availability-final-fantasy-xv-ultimate-collectors-editions
Ultimate Collector's Edition တစ်ခုကို $270 ကျပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Final Fantasy XV,aspecial steelbook case, an artbook,aNoctis ပုံ Play Art Kai,asoundtrack, special cover art နဲ့ King's Glaive CGI movie တို့ပါဝင်ပါတယ်။ အခု ရောင်းမယ့် ဟာတွေက Final Fantasy XV စတင်ထုတ်မယ့် september 30 အမှီ ဝယ်သူဆီ ရောက်လာမယ်ဆိုတာတော့ အာမ မခံထားဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Square Enix ကတော့ ဒီလို ultimate collectors edition…
All Mi phone model can use Myanmar Font and Root
Xiaomi brand ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ ယခုအခါ တိုးတက်များပြားလာတာနဲ့အမျှ သိချင်ကြ လေ့လာချင်ကြသော သူငယ်ချင်းများလည်း တိုးလာကြပါတယ်…. ဒီဂရုထဲက ဆရာ့ဆရာများကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ဖြေကြ ပြောပေးကြပါတယ်… လိုင်းမကောင်းတာက တစ်ကြောင်း၊ အလုပ်မအားလပ်က တစ်ကြောင်း စသော အကြောင်းအရာများကြောင့် ဆရာ မဟုတ်သော ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော်သိသလောက် လေ့လာမိသလောက် xiaomi ph models လေးများနဲ့ အသုံးပြုပုံများကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. လွတ်လပ်စွာ ရှယ်နိုင် ကူးနိုင် သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်……
မြန်မာပြည်မှာ အသုံးအများဆုံး models တွေကတော့…
redmi 1sredmi note 3g/4gmi3w/cmi4w/c
ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားကို မူတည်ပီး မြန်မာစာဖောင့်ထည့်ဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ root နည်း မျိုးစုံရှိလာခဲ့ပါပီ….
ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ဆက်စပ်၍ မရသော အရာများ
ကျားသားမိုးကြိုး ဒီနေ့ သားတော်မောင် စောစောစီးစီး ဖလက်ပြသွားသည်။ သူအိပ်ပြီဆိုတော့ ကျန်သည့် အချိန် တွေက ကိုယ့်အချိန် ပဲမို့ တီဗီကြည့်မလား စာဖတ်မလား တစ်ခုခု လုပ်ရုံပင်။ ကဲ ဒီနေ့တော့ စာလေး ဘာလေး ဖတ်အုံးမှပါလေ ဟုတွေးကာ မောင်ပွ တစ်ယောက် စာအုပ်စင် ဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့၏။ သည်တွင် အိမ်အောက်မှ တစ်ဒုန်းဒုန်း တက်လာသော မိန်းမ ခြေသံ အား ကြားလိုက်ရပြီးလျှင်
" ကိုရင်ပွ ဒါက ဘာလုပ်မလို့လား"
" စာလေး ဘာလေး ဖတ်မလားလို့လေ"
" အော် ကောင်းတယ် ဖတ်ဖတ် ဒါထက် အခု ရှင် ဘယ်စာပေတွေကို လေ့လာနေသတုန်း"
" လောလောဆယ် လက်ဝဲ စာပေတွေကို လေ့လာနေတယ်"
" ဟွင် ရှင့်နှယ်တော် မဟုတ်တာ တစ်ခြားစာတွေဖတ်စမ်းပါ ဘယ့်နှာပြုလို့ ဒီလက်ဝဲ စာပေတွေကို လေ့လာနေရသတုန်း ပြစမ်း ရှင်အခု ဘယ်လက်ဝဲ စာပေ ဖတ်နေတာတုန်း"
" မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ ရဲ့ တောတွင်းစွန့်စားခန်းများ"
" ငင့် တွတ်ပီက လက်ဝဲ စာအုပ်လား"
" အာ့ ဘိုဖြစ်"
" ငါ့ဘယ်ဘက်စာအုပ်ပုံကနေ ယူလိုက်လို့ လက်ဝဲ စာပေလို့ခေါ်တာလေ အာ့ရဘူးလား"
Crack, Patch, Serial, KeyGen အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုပုံ
Free မရတဲ့ Program တစ်ခုကို အသုံးပြုဖို့ရာ key လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း program ကို install လုပ်ရုံနဲ့ သုံးလို့မရသေးပါဘူး။ key ထည့်မှသာ အပြည့်အဝ အသုံးပြုရပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ key ကို program ကို ဝယ်မှသာ ရပါတယ်။ key မှာ နံပါတ်တွေ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ ရောနှောပါရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ * # $ တို့ ပါတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ = 2T8V - 445P – 2AL8 – 11EE – 6588 – AC67
Program တစ်ခု အလကား သုံးရဖို့ လုပ်ပေးတဲ့ နည်း ၄ မျိုး ရှိပါတယ်။
Crack ကို အသုံးပြုခြင်း Patch ကို အသုံးပြုခြင်း Serial ကို အသုံးပြုခြင်း Keygen ကို အသုံးပြုခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Key နဲ့ ထည့်သုံးနေသော်လည်း internet ချိတ်လိုက်တာနှင့် ထို program ရေးတဲ့သူက သုံးစွဲသူရဲ့ key တရားဝင် ဟုတ်မဟုတ် online ကနေ လှမ်းစစ်ပါတယ်။ ဒီလို တရားဝင်မဝင် စစ်ဆေးတဲ့ အပိုင်းကို hacker က အရင် ဖျက်ပစ်ထားပြီး ပြန်လည် ပြုပြင်ထားတဲ့ file ကို ပြောတာပါ။ Crack file တွေက size ကြီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်က အဲ့ဒီ program က update ပေးလို့ လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် crack file အသုံးပြုထားတဲ့ ဒီ program ဟာ နဂို မူလ တရားဝင်မဝင် စစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းကို မဖျ…
E3 2017 ရဲ့ လူအများ စိတ်အဝင်စားဆုံး ဂိမ်း ၃၀
E3 ပွဲကတော့ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျင်းပတဲ့ ပွဲဖြစ်သလို ဂိမ်းမာတွေအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ game company တွေက သူတို့ရဲ့ နှစ်ရှည်လများ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဂိမ်းအသစ်တွေကို ဒီလိုပွဲတွေမှာ ထုတ်ဖော်ပြသကြလို့ပါပဲ ။ ဒီလို ပြသွားတဲ့ ဂိမ်းတွေထဲက လူတွေ စိတ်အဝင်စားဆုံး ဂိမ်း အခု ၃၀ ကို ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
(EA Bioware; PC/Xbox One/PS4; Fall 2018)
Shoot those monsters … Anthem. Photograph: Electronic Arts
Bioware Edmonton က ဖန်တီးထားတဲ့ စွန့်စားခရီးစဉ်ဇာတ်လမ်း adventure အမျိုးအစား ဂိမ်းတစ်ခုပါ ။ Bioware studio က Mass Effect နှင့် Dragon Age titles တွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ developer ဖြစ်ပါတယ် ။ freelancers လို့ခေါ်တဲ့ တပ်ဖွဲ့က အထက်က စေလွှတ်မှုအရ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိတဲ့ ဂြိုလ်သစ်ကို သွားရောက်ရပြီး ဒီမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ monster တွေကို ပစ်ခတ်ရမယ့် co-op online shooter ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ အာကာသယာဉ် ဝတ်စုံကို ability အမျိုးမျိုးနှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး cinematics တွေ စကားပြောတွေနှင့်အတူ mission တွေ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။